တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးစေချင်သည် NLD | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးစေချင်သည် NLD
တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးစေချင်သည် NLD
Posted by Davit on Jun 9, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
NLD ရဲ့ ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခုထွက်လာပြီး စဉ်းစားမိတာပါ။
၂။ ကူညီကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတယ်။
၃။ ချက်ချင်းရက်ဆိုင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံတယ်။
၄။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းတယ်။
ဒီအချက်လောက်ပဲလားဗျာ…. လောလောလပ်လပ် အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖို့ ဘယ်လိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်တို့ ဘာတို့မပါဘူးလား…. ကျွန်တော့်ဆိုလိုချင်တာက ခုချက်ခြင်း NLD မှ သွားရောက်လှူစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အကူအညီလိုနေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်လိုအကူညီပေးဖို့အတွက် ဘယ်လိုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် (or) အစီအစဉ်ကို ချပြပေးစေလိုပါတယ်။ ခု ဒီမန်းဂေဇက်ဆိုဒ်မှာတောင် အဘဖေါတို့ ကိုထူးဆန်းတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ လှူဖို့အတွက်ကို အစီအစဉ်တွေဆွဲနေပါပြီ။ ဥပမာ ဦးတေဇကတော့ ငွေလည်းရှိသူ(စေတနာလည်းသူအပြည့်ရှိမှာပါ) စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ပီပီ သွေးပူနေတုန်းခုအခြေအနေမှာ (ယခုချက်ချင်း) ငွေကိုပစ်လှူလိုက်တယ်။ အဲ့ဒိအတွက် သူအပါအဝင်သူ့လုပ်ငန်းစုကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုကို အနည်းနဲ့အများသာကွာမှာပါ ရရှိသွားမှာပဲ။ သာဓုလည်းတစ်ကယ်ခေါ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ အဓိကမျှော်နေတာ ဦးတေဇလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဘက်ကီမွန်းလည်းမဟုတ်ဘူး၊ သမ္မတကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အဓိက မျှော်နေတာက အမေ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ပါတီကြီးက ဒီကိစ္စနဲ့ပါက်သက်ပြီး (အကူအညီပေးဖို့ကိုပြောတာပါ..နိုင်ငံရေးမဟုတ်) ဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိထားတယ်၊ ဘယ်လိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကို ပြည်သူကို ချက်ချင်းမလုပ်နိုင်ရင်တောင် ချပြစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး အကူအညီပေးရေးအတွက်အစီအစဉ်တွေလုပ်ဖို့ဆိုတာ အမေစု ကိုယ်တိုင်တောင်မလိုပါဘူး(ပါနိုင်ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါ)။ အမေဦးဆောင်တဲ့ ပါတီရဲ့လက်အောက်က သူတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက ကိုယ်တက်နိုင်သလောက်လှူကြပြီး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဝမ်းသာအားရနဲ့ ပါဝင်ကြမှာကတော့မလွဲဧကန်ပါ။
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုလိုနေသလိုဖြစ်နေလို့သာရေးလိုက်တာပါ။ အမေတို့မှာလည်း အစီအစဉ်တွေရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျိန်းသေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ဗျာ …. ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဘယ်တော့မှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ချပြသင်တယ်လို့ထင်မိတာပါ။
ပို့့စ် ၂၅ခုကျော် ရေးပြီးမှ ပေါ်မယ်ထင်ပါတယ်.
ဗျစ်ဗျစ်တို့ ဗိုက်ဗိုက်တို့ရေ .. မပေါ်တာ ဘာများလဲ ဟင်င်င်….
ganan gyi says:
မှန်တယ်ထင်လို့ လက်မတော့ထောင်သွားပါတယ်။ မဝေဖန်တက်ပါ။
Ko SetPe says:
အခုအချိန်သည် NLD အတွက် ကြေငြာချက်တစ်စောင် ကောက်ထုတ်ရုံမှလွဲပြီး မည်သည်မျှမလုပ်သည်မှာ အကောင်းဆုံး
ဟုထင်ပါသည်။ လွှတ်တော်ထဲရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီ RNDP သည်လည်း ငြိမ်နေသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
Ko SetPe ရေ…. ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက နိုင်ငံရေးအရ ဝင်ပါစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူး အကို။ ပြည်သူက 100% ယုံကြည်အားကိုးထားတဲ့ အမေတို့ပါတီကြီးကဦးဆောင်ပြီး (အမေစုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖို့တောင်မလိုပါ) ကူညီကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေ (အမြန်ဆုံး) ရရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုပါ။ ရခိုင်မှာအကူအညီလိုနေတဲ့လူဦးရေက Eleven ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရဆိုရင် သောင်းဂဏန်းနီးပါးလောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ ဒါတောင် အဲ့ဒိကိန်းဂဏန်းက ရခိုင်လူမျိုးတွေပဲပါသေးတယ်နော်။ ဆူပူတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ မိသားစုဝင် (ဆူပူနေတဲ့သားသမီးတွေကိုမနိုင်လို့ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်ကြီး ရိုဟင်ဂျာအဖိုးအဖွားတွေ / ဘာမှနားမလည်သေးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ခလးလေးတွေ) တွေမပါသေးပါဘူးထင်တာပဲ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ…အဲ့ဒိလိုဆူပူမှုတွေကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အဖိုးအဖွားကြီးတွေနဲ့ ဘာမှနားမလည်သေးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ခလေးလေးတွေရဲ့ ဒုက္ခကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ စာနာနားလည်ပြီးကူညီပေးဖို့မသင့်ဘူးလား။
သူတို့တွေပါထည့်ပေါင်းလိုက်ရင် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လူဦးရေက နည်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီအတွက် အမေဦးဆောင်တဲ့ပါတီကြီးကနေ ဥပမာ။ ။ NLD ဦးဆောင်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ဆိုတဲ့တံဆိပ်ပါဝင်တဲ့အကျီလေးတွေကို တစ်ထည် 5000 နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေအတွက် ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဗျာ ရှိပြီးရင်တောင် ထပ်ဝယ်ကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ (ဒီအတိုင်း 2500/3000 နဲ့ရောင်းတာတောင် ဝယ်နေကြတာ အားလုံးအသိပဲလေ)။ အဲ့ဒိလိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ် ရန်ပုံငွေအတွက် လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်နေတဲ့ လှိုင်မြို့နယ်မှာ ကျွန်တော်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီး အုတ်တစ်ချပ်စာဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်မိမှာပါ (ကျွန်တော့်လိုပဲ ပါဝင်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလည်း နည်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ တွေးကြည့်ဖို့တောင်မလိုပါဘူးဗျာ)။
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ ရန်ပုံငွေအတွက်ပါ။ နိုင်ငံရေးအရ ရခိုင်အရေးအတွက် မိန့်ခွန်းဝင်ပြောပေးဖို့ ကြေငြာချက်ထုတ်ဖို့တွေမဟုတ်ပါဘူး။
မင်းလည်း ပါတီဝင်ပဲ ဘာဖြစ်လို့ပါတီမှာ(မြို့နယ်ခွဲမှာ) သွားပြီး လုပ်မှာလား၊ မလုပ်ဘူးလား၊ လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလား ဘာလို့သွားမမေးတာလဲ ဆိုရင်…….ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ “အထက်ကညွှန်ကြားချက်မရှိသေးဘူး ညီလေးရဲ့” လို့ ပြောလို့ပါ။
ဒီလိုရေးလိုက်လို့ ကျွန်တော့်ကို ရိုဟင်ဂျာ လိုလားသူတစ်ဦးလို့တော့မထင်စေချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးပါ။ ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးကမှ ရိုဟင်ဂျာကို လိုလားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကြောင့်ပါ။
(ကူးယူတာမကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ ဒီလိုသတင်းမျိုးကိုကူးယူပြီးဖေါ်ပြလို့ ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ဘူးထင်ပါတယ်)
“မောင်တောမှ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၄ ခု ဖွင့်ထားတယ်။ အဲဒီမှာ ရောက်ရှိနေသူက ၂၀၃၈ ဦးရှိတယ်။ ဘူးသီးတောင်မှာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီကို ရောက်နေတာ ၉၄၈ ဦးရှိတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၀ ကျောင်းမှာ ရောက်ရှိခိုလှုံနေသူတွေက ၅၀၀၀ကျော် ရှိတယ်။
စစ်တွေမြို့အနီး ရပ်ကွက်တွေမှာ ရှိတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် အကာအကွယ်ပေးဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရရုံးကို အကြောင်းကြားလာတာ ရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက် က လူတွေက ဘုမေဘက်ကို သွားချင်တဲ့အကြောင်း အကြောင်းကြားလာတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ထဲမှာလည်း လူကောင်းတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၂ ခု ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုက စက်ရုံစု (နာဇီရွာ အုပ်စု)၊ အ.ထ.က(ခွဲ) မှာ ဖွင့်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်ဦးရေ ၂၁၂၅ ဦး ရောက်ရှိခိုလှုံနေပါတယ်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၃၃ စု ရှိပါတယ်။
မကျည်းမြိုင်ဗလီမှာလည်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၁ ခုဖွင့်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ၃၀၀ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ အိမ်ထောင်စု ၄၀ ရှိပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေက တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ယုံကြည်မှု မတည်ဆောက်နိုင်လို့ အပြန်အလှန် ဖြစ်နေကြတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဖက် ရော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေဖက်ရော နှစ်ဖက်စလုံးသွားပြီး စေ့စပ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် ပထမဖြစ်ကာစ က အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ရှိတဲ့ဘက်ကို အခြေအနေ ရှုပ်တွေးနေတော့ ဘယ်သူမှ မသွားရဲကြဘူး။
အခုအချိန်မှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ရှိတဲ့ဘက်ကို သွားပြီး ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ထိပ်တန်း အရာရှိတစ်ဦးက Eleven Media Group သို့ အတည်ပြု ပြောကြားပါသည်။
So,if NLD do nothing for public.We don’t need that party anymore.
So far,NLD did nothing.Such this emergency situtation,NlD should do nothing except from legislate only one letter.If you think like that ,every one can release that
kind of stupid letter.In conclusion,”NLD IS NOTHING”!
ကုလားကိုကျတော့ သားခေါ်ပြီး သကာလ လူနည်းစုနှိပ်စက်ခံနေရတယ်ပြောပြီး
ရခိုင် လူများစုနှိပ်စက်ခံနေရတာကြ ဘာအသံထွက်မလဲ စောင့်နေပါတယ် အန်တီစု။
အမေစု(အရင်က) အန်တီစုရေ ကိုယ့်အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ ကိုမစောင့်ရှောက်ရင်တော့ sorry ပါ။
.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”သား”လို့ခေါ်နိုင်တာ..သူ့ကို “အမေ”လို့ခေါ်သူတိုင်းကိုပဲ..။
.. နောက်.. မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုပါ..။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို.. စစ်တပ်အုပ်ချုပ်အောင်… လုပ်နေတာ..
.. စစ်တပ်နဲ့တန်တာ.. ဘယ်သူတွေလည်း.. သေသေချာချာ.. စဉ်းစားကြစေလိုကြောင်း….
ဒီမိုကရေစီနဲ့..တန်သလား.. သေသေချာချာ.. စဉ်းစားကြစေလိုကြောင်း….
‘ခင်ဗျာတို့ဟာ လွတ်လပ်ရေးကိုလိုချင်ရင် လွပ်လပ်ရေးကိုရနိုင်လောက်တဲ့ စည်းကမ်းကိုရှိကြပါ။ လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်လို့ရှိရင် လွတ်လပ်ရေးကိုရနိုင်တဲ့ ညီညွှတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းကြပါ။ လွတ်လပ်ရေးကိုလိုချင်ရင် လွတ်လပ်ရေးကိုရနိုင်တဲ့ ထူထောင်မှုကိုလုပ်ကြပါ။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် ရှေ့ကို လွတ်လပ်ရေးအရသာကို ခံစား၊ စံစားစေချင်တယ်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်ကြဖို့၊ စည်းကမ်းရှိကြဖို့၊ ယခုကတည်းက ခင်ဗျာတို့ကိုယ်ကို အကျင့်ဆိုးတွေ၊ အကျင့်ဟောင်းတွေ၊ စောက်ကျင့်တွေကို ပြင်ကြဖို့လိုပြီဆိုတာ ကျနော် ကနေ့ပြောခဲ့ချင်တယ်။” ( ၁၃ . ၇ . ၁၉၄၇ မြို့တော်ခန်းမ၊ ဗိုလ်ချုပ်နောက်ဆုံး ပြောကြားခဲ့သောမိန့်ခွန်း။)
Burma’s Leader: Unrest Threatens Stability, Democracy
Voice of America (blog) – 17 hours ago
Burmese President Thein Sein warned Sunday that if sectarian violence in the western Rakhine state spreads further, it could put the country’s …
သူကြီးရေ…..ကုလားတွေ ငိုပြတာကျ သား သားနဲ့
ကိုယ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူတွေကို ကုလားတွေကစော်ကား၊ သတ်ဖြတ်
အဲဒါတွေကို သူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့လက်ခံရင် ကျွန်တော့ကိုဒီရွာမှာ နေခွင့်မပေးပါနဲ့။
ကျွန်တော်က အေးစေချင်လို့ စိတ်ပြေလက်ပျောက်အပျော် ပို့(စ်)တွေတောင်တင်ပြီး
အင်း ဒီကိစ္စက ကိုယ့်ရခိုင်တွေပဲ ရှင်းလို့ရမယ်ထင်တယ်
ခုတောင် စလုံးမှာ အလှူတွေကောက်ထားတာမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရနေပြီ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရယ် နောက် ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတဲ့ တခြားမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းထားတာလေ
လူပဲဗျာ………… အမြဲတမ်းမဆိုးနိုင်သလို အမြဲတမ်းလဲမကောင်းနိုင်ပါဘူး
ရခိုင်သားပေးပို့တဲ့ ကဗျာ ထဲကလိုပဲပေါ့
မနေသာရင် လေညာက လူတွေဆင်းကူပေးပါမှာ
ဟုတ်တယ် အဲဒါကျွန်တော်ဖေးဘုတ်ထဲမှာ တွေ့လိုက်ရတယ် မျက်နှာကိုလဲခြမ်းထားသေးတယ်
မှန်တယ်ဗျ NLD လည်းတစ်ကယ်ဖြစ်လာတော့ဖွတ်ကြားပဲ အဲ့ဒါဘာကိုပြနေလဲဆို
တာ လူတိုင်းလူတိုင်း ဘယ်ပါတီကိုမှအားမကိုးပဲမိမိဘာသာကြိုးစားသင့်တယ်ဆိုတာကို
ပြနေတာ တစ်ချို့ကလဲပြောကြတယ် သူတို့ကလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပါဘူးပေါ့
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရင် NLDကနိင်ငံရေးပါတီထက် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဆန်နေတယ်
ဒေါ်စု president ဖြစ်လာလို့ စစ်တခုဖြစ်လာရင်တောင် သူ့ခမျ သူယူထားတဲ့ငြိမ်းချမ်း
ရေး nobel prize တွေကြောင့် peace ဆိုတဲ့စကားကလွဲရင်ဘာမှပြောနိင်မှာမပာုတ်ပါဘူး
NLD မှကလဲပြည်သူလူထုကိုထောက်ပံ့ဖို့နေနေသာသာ သူတို့တောင် ဘုရားပွဲလေးတွေမှာ
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ၂၇ (ရိုဟင်ဂျာ)
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးသူများလဲရှိသလို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မန့်နေကြသူတွေရှိနိုင်လို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
ပြည်သူတွေအတွက် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ဒုက္ခခံပြီး နေခဲ့ရတဲ့ အမေစုအပါဝင် ၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံရသူများရဲ့ ပေးဆပ်မှုကို အားလုံး မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်နော် ။ စတန့်ထွင်ပြီး ၊ နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်တာလို့ဝေဖန်သူတွေ ရှိဦးမလားပဲ … ဒီလိုဆိုလည်း .. ဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ စတေးခံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး … သူတို့ ကိုယ်ထဲ ၊ အသွေးသားထဲကိုက … ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်းလို့ ခံယူထားပြီး ၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါ ။ ဒါတွေကို ကျွန်မတို့တွေ … မျက်စိရှေ့တွေ့ ခဲ့ နားလည်ခဲ့ပြီးလို့ … သူတို့တွေအပေါ် ကရုဏာသက်ခဲ့သလို ၊ ယုံကြည်မှူတွေလည်း ပိုခဲ့ပါတယ် ။ အင်တိုက်အားတိုက်လည်း … သူတို့ အပေါ် ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေက … စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ထောက်ခဲ့ကြတယ် ။
အခုလို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ ကိစ္စမှာ ၊ ပြည်သူတွေအရေးအတွက် နှစ်ရှည်လများ စတေးခံခဲ့သူတွေမပြောနဲ့ … ကိုယ်တွေလို သာမန်ပြည်သူတွေတောင် …. မခံချိမခံချင်ဖြစ်ကြရတာပါ ။ အမေစုတို့ နှုတ်ဆိတ်နေတာ …. အကြောင်းမဲ့ကြောင့်လို့တော့ မထင်ဘူး ။ အချိန်တစ်ခု ၊ အခြေနေတစ်ခုကို … စောင့်ကြည့်သုံးသပ်နေတာလို့ ထင်မိပါတယ် ။ အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ပြီး ၊ အဖြေတခုခုပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ … ကျွန်မက ယုံကြည်နေတုန်းပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုက .. သနားကြင်နာတတ်ကြပါတယ် ။ ရခိုင်မှာ ဒီလိုဖြစ်တော့ … အစိုးရအပါဝင်၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့စည်းတွေကလည်း တတ်နိုင်သမျှ ပံ့ပိုးနေကြပါတယ် …. ။ သူများတွေ အပြိုင်ဆိုင် သနားပြီး လှူဒါန်းနေကြတာတောင် …. ပြည်သူတွေအတွက် အနစ်နာခံခဲ့သူတွေက … ဘယ်လို အသည်းမာနိုင်ပါ့မလဲ …. ။ဒီကြားထဲမှာ ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ တွေးမမှီတဲ့ အခြေနေအကြောင်းရာ တစ်ခု ရှိကိုရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မက ယုံကြည်တယ် ။
ဖေ့စ်ဘွခ်မှာလဲ ပလူပျံအောင် အမေစုကို ဆဲထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ် ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုမြင်မြင်ပါ .. ကျွန်မကတော့ အမေစုရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု ပညာနဲ့ …. ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ယုံကြည်ချက်တွေကို ကြည်ညိုတုန်းပဲမို့ …. NLD ကိုအပြစ်မမြင်ပဲ ….. စောင့်ကြည့်နေတုန်းပဲ …….. ။
Ma Etone ထောက်ပြထားတာတွေက သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ…..